ဝူဟန်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် (Novel Corona Virus) ထက် ပိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရာ? - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးပညာနောက်ဆုံးသတင်းများ » နိုင်ငံတကာ သတင်းများ » ဝူဟန်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် (Novel Corona Virus) ထက် ပိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရာ?
နောက်ဆုံးရသတင်းများအရ ဝူဟန်ကိုရိုးနာ ဗိုင်းရပ်စ်ဟာ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာ လူ ၂၇၀၀ ကျော်ကူးစက်ခံနေရပြီး သေဆုံးသူအရေအတွက်မှာ ၈၀ ကျော်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံအသီးသီးက အုပ်ချုပ်ရေး၊ ကျန်းမာရေး အကြီးအကဲတွေဟာ ရောဂါပိုးကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့အတွက် နည်းလမ်းမျိုးစုံနဲ့ ကြိုးစားနေကြတဲ့အချိန်မှာ ဝူဟန်ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ယှဉ်ပြီး ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ အရာတစ်ခုကိုပါ ပူးတွဲ ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။
ဒါကတော့ infodemic လို့ခေါ်တဲ့ သတင်းစကားအမှားတွေ ချဲ့ကားခြင်း ပြဿနာပါ။
Epidemic ဆိုတာကတော့ ကူးစက်မြန်၊ ထိန်းချုပ်ဖို့ ခက်ခဲတဲ့ ကပ်ရောဂါတစ်ခု အချိန်ကာလ တစ်ခုမှာ ဖြစ်ပွားတာကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပြီးတော့ သူနဲ့ ဆင်တူတဲ့ အသုံးအနှုန်း infodemic ကတော့ ပြဿနာတစ်ခုပေါ် အခြေခံပြီး ချဲ့ကားလာတဲ့ သတင်းစကားတွေကြောင့် ရှိရင်းစွဲ ပြဿနာကိုပါ ဖြေရှင်းဖို့ ပိုခက်ခဲလာနိုင်တဲ့ အခြေအနေတစ်ခုကို ခေါ်ပါတယ်။
ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်လာတိုင်း ကောလဟာလတွေလည်း ယှဉ်ပြီးပါလာတယ်ဆိုတာ ထူးဆန်းတာတော့ မဟုတ်ပေမဲ့ ပူပန်ကြောက်ရွံ့နေကြတဲ့ လူတွေရဲ့ စိတ်ကို အမြတ်ထုတ် အခွင့်ကောင်းယူပြီး သတင်းတွေ ချဲ့ကားပြီး ရေးကြတဲ့၊ သတင်းအမှန် အမှား မစစ်ဆေးဘဲ ရေးနေကြတဲ့ မီဒီယာတွေဟာ အများအပြားရှိနေပါတယ်။
ဒါကြောင့် သတင်းအမှားတွေရော၊ အတည်ပြုဖို့အတွက် စောင့်ဆိုင်းနေဆဲ သတင်းတွေကိုပါ တစ်စုတစ်စည်းထဲဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
၁။ အရက်ဟာ ဝူဟန် ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်ကို သေစေနိုင်တယ်။
ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေအပေါ်မှာ ဦးဆုံး ပျံ့နှံ့လာတဲ့ သတင်းအမှားတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အရက်သောက်ခြင်းဟာ ကူးစက်ရောဂါကို ပျောက်ကင်းစေနိုင်တယ်ဆိုတာ အခြေအမြစ်မရှိတဲ့ သတင်းတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်။
၂။ HIV ရောဂါတွင် အသုံးပြုသော ဆေးများဖြင့် ဝူဟန် ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်ကို ကုသ အောင်မြင်နေပြီ။
HIV ရောဂါပိုးကြောင့် ခုခံအားကျဆင်းတဲ့အခါဖြစ်လာတဲ့ ပြင်းထန်အဆုတ်ရောင်ရောဂါမှာ အသုံးပြုတဲ့ ဆေးတွေကို ဝူဟန် ဗိုင်းရပ်စ်ကို ကုသတဲ့နေရာမှာ စမ်းသပ်ထည့်သွင်း အသုံးပြုနေတယ်ဆိုတာ မှန်ပေမယ့် ရောဂါပိုးကို အမြစ်ပြတ်အောင် ကုသနိုင်ခြင်း ရှိမရှိကတော့ အတည်မပြုရသေးပါဘူး။
၃။ ရောဂါလက္ခဏာမပြသေးဘဲ (ရောဂါပျိုးချိန်) လူတစ်ဦးပေါ်တစ်ဦး ကူးစက်နိုင်တယ်။
ရောဂါစတင်ကူးစက်ခံရတဲ့အချိန်နဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေစပြတဲ့အချိန် ကြားထဲက ကြားကာလကို ရောဂါပျိုးချိန် (incubation period) လို့ခေါ်ပါတယ်။ ခု ဝူဟန်ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်အတွက် ရောဂါပျိုးချိန်ကို တိတိကျကျမသိရသေးပေမယ့် ၁၀ ရက်ကနေ ၁၄ ရက်အတွင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ယူဆထားကြပါတယ်။
ရောဂါပိုးတစ်ခုဟာ ရောဂါလက္ခဏာပြနေတဲ့သူဆီကပဲ ကူးစက်နိုင်တာပါတယ်လို့ သိထားရာကနေ နောက်ဆုံး ယူဆချက်တွေအရ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံထားရပေမဲ့ ရောဂါလက္ခဏာမပြသေးတဲ့ ကျန်းမာနေတဲ့ လူတစ်ယောက်ဆီကလည်း ကူးစက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ အတည်ပြုဖို့လိုအပ်နေတဲ့ အချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်လည်း အလွန်အမင်း ကြောက်ရွံ့တာတွေ မဖြစ်ဖို့ သတိပေးချင်ပါတယ်။
၄။ မျက်လုံးကနေလည်း ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။
ဒီအချက်ကတော့ မှန်ပေမယ့် လူအများ မှားယွင်းယူဆနေကြပါတယ်။ မျက်လုံးချင်း ဆုံမိလိုက်တာနဲ့ ကူးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ ရောဂါပိုးကို ကိုင်မိထားတဲ့လက်နဲ့ မျက်လုံးကို ပွတ်မိတဲ့ အချိန်မျိုးမှာ ကူးစက်နိုင်တာကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် လက်ဆေးဖို့ အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။
၅။ ဝူဟန် ဗိုင်းရပ်စ်ဟာ ချက်ချင်းဆိုသလို ဗိုင်းခနဲ လဲကျသေဆုံးစေနိုင်တယ်။
ဖေ့ဘွတ်မှာ ပျံ့နှံ့နေတဲ့ လူတွေ ရုတ်တရက်ဆိုသလို လဲကျသွားတဲ့ ဗီဒီယိုတွေဟာ လူတွေကို မလိုအပ်ဘဲ အထိတ်တလန့်ဖြစ်စေပါတယ်။
ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ရောဂါတွေဟာ ရုပ်ရှင်တွေထဲကလို ရုတ်တရက်သေဆုံးနိုင်ချေ အလွန်နည်းပါးပါတယ်။ ရောဂါလက္ခဏာက ကူးစက်ခံရပြီးချင်း ချက်ချင်းပေါ်လာတာမျိုးလည်း မဟုတ်ပါဘူး။
၆။ ဝူဟန် ဗိုင်းရပ်စ် ပျံ့ပွားမှုဟာ အလွန်အမင်း ကြောက်လန့်ရမယ့် အချိန်တစ်ခုကိုရောက်နေပြီ။
ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ဟာ လူမှလူကို ကူးနိုင်သည်ဆိုတဲ့ အချက်ကို အသိနောက်ကျခြင်း၊ စတင်ဖြစ်ပွားတဲ့ အချိန်ဟာ လူအများ ခရီးသွားလာမှုများတဲ့ တရုတ်နှစ်သစ်ကူးအချိန်အခါတွင်ဖြစ်နေခြင်း၊ ဝူဟန်မြို့သည် လူနေထူထပ်ပြီး ခရီးသွားများတဲ့ဒေသဖြစ်ခြင်း၊ ရောဂါရှာဖွေအတည်ပြုရန် ခက်ခဲခြင်း ကြောင့် ကူးစက်မှုနှုန်းဟာ လျင်မြန်ပေမဲ့ သေဆုံးမှုနှုန်းဟာ ယခုချိန်မှာ ကူးစက်သူစုစုပေါင်းရဲ့ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းအောက်မှာ သာရှိနေပါတယ်။
ယခုဖြစ်ပွားနေတဲ့ နိုဗယ်လ်ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ အုပ်စုတူ ၂၀၀၂ ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပြင်းထန်အဆုတ်ရောင်ရောဂါ (SARS) ရဲ့ သေဆုံးမှုနှုန်းမှာ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့ပြီး အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသအဆုတ်ရောင်ရောဂါ (MERS) ရဲ့ သေဆုံးမှုနှုန်းမှာတော့ အဆိုးရွားဆုံးချိန်မှာ ၃၅ ရာခိုင်နှုန်း ကျော်လွန်ခဲ့ပါတယ်။
ရှေ့ကဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ရောဂါပိုးနှစ်ခုနဲ့ ယှဉ်ရင် ဝူဟန် ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်ဟာ ကူးစက်မှုနှုန်း ပိုမြန်ဆန်ပေမယ့် သေဆုံးမှုနှုန်း၊ ရောဂါပြင်းထန်မှုကတော့ လျော့နည်းနေပါသေးတယ်။
မဖြစ်ခင်မှာ ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်အောင် သတင်းတွေကို သိထားတာဟာ ကောင်းပေမယ့် သတင်းအမှားတွေကြောင့် စိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေတာတော့ မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေ တွင်ကျယ်လာတဲ့ခေတ်မှာ လူတွေရဲ့ စိတ်အခြေအနေကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး အမြတ်ထုတ်မယ့် အွန်လိုင်းမီဒီယာတွေရဲ့ သားကောင်တွေမဖြစ်စေဖို့ သတိပေးရင်း သတင်းစစ်၊ သတင်းမှန်တွေကို Hello Sayarwon Facebook page, ဝက်ဆိုဒ်ကနေဖြစ်စေ၊ တခြား မှန်ကန်တိကျတဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေကနေ ဖြစ်စေ စောင့်ကြည့်ကြဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး လုံးဝမယုံသင့်တဲ့ ချင်း (ဂျင်း) များ
Probiotics နဲ့ Prebiotics ဘာကွာလဲ……..